स्लॉट्स लि। मा मृत स्लटहरूको पुस्तक
अनौंठो र आकर्षक सुविधाहरू किन अनलाइन भिडियो स्लटहरूसँग यति मायालु हुन्छन् भन्ने मुख्य कारण हो। स्लट खेलहरू यो दिन उत्कृष्ट विषयवस्तुको साथ आउँदछ, विकासकर्ताहरूलाई ग्राफिक्स र चाखलाग्दो विशेष वर्णहरू, सुविधाहरू र प्रतीकहरू थप्न अनुमति दिदै। यसले प्रत्येक खेललाई परिचित तुल्याउँछ तर एकै समयमा मिलको रन-अफ-द-खेलहरू भन्दा धेरै भिन्न र बढी उत्साहजनक बनाउँदछ। एक रोचक र आकर्षक स्लट खेलको एक राम्रो उदाहरण जुन हाल अनलाइन लोकप्रिय छ, हो मृत स्लट को पुस्तक। Play 'n Go द्वारा रिलीज गरिएको, यो खेल एक मिश्री विषयवस्तुको साथ आउँदछ र हाल योमा उपलब्ध छ https://www.slotsltd.com/
मरिसकेका स्लटहरूको पुस्तकको कुन पुस्तक?
को मृत स्लट को पुस्तक अपरिचितसँग परिचित सन्तुलनको लगभग असम्भव कार्यको प्रबन्ध गर्दछ। नतिजा एक आकर्षक र रमाईलो खेल हो जुन बुझ्न र खेलन पनि सजिलो छ। यो धेरै फरक सुविधाहरूसँग आउँदैन जुन खेललाई गोलमाल र जटिल बनाउँदछ, यसको सट्टामा उपलब्ध सुविधाहरू एक तरीकाले डिजाईन गरीएको छ जसले खेललाई अझ रमाइलो बनाउँछ! इजिप्टियन विषयवस्तु राम्रोसँग समाहित भएको छ र विशेष रूपमा प्रभावशाली पृष्ठभूमिमा स्पष्ट छ र पृष्ठभूमिमा रमाइलो तर मादक संगीत।
मृत स्लट लेआउटको पुस्तक
मृत स्लटको पुस्तक एक सरल र सीधा लेआउटको साथ आउँदछ। मानक × × × बोर्डको सुविधा सहित, खेलाडीहरू १० सक्रिय भुक्तान-रेखाको साथ प्रदान गरिन्छ। यहाँ क्याच भन्ने हो कि खेलले निजीकरणको लागि पनि अनुमति दिन्छ जहाँ खेलाडीहरूले खेल्न सक्ने पे-लाइनहरूको स of्ख्या, सिक्काको स and्ख्या र सिक्काको मूल्य इत्यादि छनौट गर्न सक्दछन्। सम्पूर्ण संयोजनले न्यूनतम शर्तका साथ खेलाडीहरूलाई प्रदान गर्दछ। ०.१० क्रेडिट र अधिक स्पिन प्रति १०० क्रेडिटको अधिकतम शर्त।
विभिन्न खेल प्रतीकहरू उपलब्ध छन्
मृत स्लटको पुस्तक केहि आकर्षक प्रतीकहरूको साथ आउँदछ जसले सम्पूर्ण खेल उज्ज्वल, जीवन्त र आकर्षक बनाउँदछ। खेलाडीहरू कुल9प्रतीकहरूको साथ प्रदान गरिन्छ जहाँ the मानक रोयलहरू हुन् र कम भुक्तान प्रतीकहरूको गठन गर्दछ। खेलाडीहरूले to देखि times प्रतीकको लागि to देखि १०० पटकको हिस्सेदारीको जीत आशा गर्न सक्छन्। जित्नेहरू केवल बायाँ देखि दायाँ गणना गरिन्छ र सिक्काको रूपमा प्रदान गरिन्छ।
अधिक मूल्यवान प्रतीकहरू धेरै रमाईलो छन् र द्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ इजिप्टियन भगवान ओसिरिस, एनुबिस र होरस। ओसिरिस तीन मध्ये सब भन्दा मूल्यवान छ र 2000 प्रतीकहरु को लागी २००० गुणा सम्मको दांव प्रदान गर्दछ। अनुबिस र होरसको मूल्य एकै छ, 750० गुना सम्मको हिस्सेदारी प्रदान गर्दछ।
अन्तमा, चिट्ठाको सब भन्दा बहुमूल्य प्रतीक रिच विल्ड प्रतीक हो। यसले symb प्रतीकहरूको लागि times००० पटकको हिस्सेदारी प्रदान गर्दछ, अधिकतम शर्तको साथ यसलाई 000००००० क्रेडिट बनाउँछ। यो प्रतीक खास गरी फ्री स्पिन मोडमा मूल्यवान छ, जहाँ अनियमित रूपमा छनौट गरिएको प्रतीक विस्तारित प्रतीक बन्छ र ज्याकपटको परिणामस्वरूप सम्पूर्ण बोर्डलाई समाहित गर्ने सम्भावना हुन्छ।
मृत स्लटको पुस्तक एक रमाइलो स्लट खेल हो र सुविधाहरूको साथ आउँदछ जुन यसलाई खेल्दा रमाईलो र आकर्षक बनाउँदछ, यदि खेलाडीहरू भाग्यशाली छन्!